Dib u dhac mar kale ku yimid magacaabista Golaha Wasiirada – idalenews.com
Magacaabista Golaha Wasiirada ee Xukuumada Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa waxaa hareerey muran aad u xoogan oo la xiriira tirada wasiirada. Tirada wasiirada ayaa la sheegey in laga dhigey 10 wasiir, hase ahaatee waxay tiradaas kooban ka careysiisey beelaha waaweyn ee iska dhex waayey liiska, kuwaasoo ku wargelieyey madaweynaha iney diidmo kala hor imaan doonaan hadii barlamaanka la hor keeno.
Waxaa jira wasaarado qaar oo la baa’biyey oo noqon doono wakaalado iyo wasaaradaha qaar oo la is raaciyey isla markaasna hal wasiir yeelan doona. sida wasaaradaha (Qorsheynta, Beeraha, deegaanka iyo Kaluumeysiga) oo laga dhigey hal wasaarad oo leh hal wasiir.
Madaxweynaha ayaa kulamo la leh beelaha Soomaaliyeed kuwaasoo hami uga jira iney saami ku yeeshaan 10kaas wasiir hase ahaatee aan wax natiijo ah ka soo bixin kulamadii ay lahaayeen labadii cisho ee la soo dhaafey.
Murankaan tirada xukuumada ayaa ku soo beegmaayo xili wax ka yar 3 cisho Ra’iisul Wasaare Saacid uga harsan tahay inuu soo dhiso golihiisa wasiirada. Ugu dambeyn waxaa la filayaa in Maalinta Sabtida ama Axada lagu dhawaaqo liiska xubnaha ka mid noqon doona golaha maadaama xiliga u harsan uu yahay mid kooban.